APC GWARA SARAKI ONYEISI OCHE NNOCHITE ANYA KA O HAPU OCHE OZUGBO
Home https://isimbido.tv/buffalo-slot-machine-download/ https://isimbido.tv/online-casino-cash-bonus/
N’ịbụ onye na-enwe ọnụ ọgụgụ ka ukwuu na ndị isi 53, ndị caucus na-enwe ọganihu bilitere site na nkwurịta okwu na President Muhammadu Buhari na Wednesday ma nye iwu ka ha kwụsị ọrụ onyeisi oche Senate Bukola Saraki ịhapụ. .//’ gwara
Onye isi oche mba nke APC, Mr. Adams Oshiomhole, kpọrọ maka ịgbahapụ Saraki mgbe o si na nzute ya na President Muhammadu Buhari pụta.
KONTA MERE SERENA WILLIAMS IHE OBUGHINUCHE NA SAN JOSE
Oshiomhole gwara ndị nnọkọ State House na Abuja na President Onye Omeiwu kwesịrị ịbụ “ihe gbasara nsọpụrụ na-ahapụ okpueze n’ụlọ ahụ na okpueze bụ”.
Ufodu ndi isi choputara n’elu oche nke APC nke Onye Nduru ndi otu a, Ahmed Lawan na-enwekwa nzuko nke ndi isi na Buhari bu na ndi isi obodo.
“Ma ihe ọ bụla bụ ihe kpatara ya, anyị nwere ike isi na ya pụọ ​​ma anyị enweghị ike ịpụ na Nigeria.
“Nanị ihe bụ na enwere nsogbu ndị ọzọ dị mkpa na nwoke ọ bụla ma ọ bụ nwanyị nke nsọpụrụ, ndị na-eme mkpebi ndị dị otú a ga-eso.
“Ekwuru m na ị gaghị anakọta okpueze nke ezinụlọ ma were ya maka ezinụlọ ma ọ bụrụ na ọ bụ maka ihe onwe gị nke o kwuru na ọ gara ezinụlọ ọzọ. Ọ bụ naanị ihe ùgwù ịhapụ okpueze n’ụlọ ahụ na okpueze ahụ bụ, “ka Oshiomhole kwuru.
Ọ na-ekwusi ike na otu onye na-achị achị ka nwere ihe kachasị ukwuu na Senate.
PDP NA-ADO APC AKA NA NTI KA HA KWUSI IMEGHIDE HA
“Ka ọ dị ugbu a, APC ka bụ ndị kasị ukwuu na Senate, anyị nwere ndị isi 53, nke ahụ karịrị nnọọ nke PDP nwere, ma ọ bụ APGA nwere.
“Enwere m ike na n’oge a, m na-anọchi anya mgbe m ṅụrụ iyi na. Enwere m isi ihe na nkwupụta m nabatara, ekwusiri m nke a ike mgbe m zutere ndị omekome na okwu ọnụ.
Ekwusiri m nke a ike mgbe m zutere ndị nnọchiteanya nke ụlọ nnọchiteanya, na anyị dị njikere ikpe ikpe ziri ezi nye onye ọ bụla nwere obi ọjọọ na onye iwe ya dị otú ahụ na anyị nwere ike ịnagide ha ma ọ bụrụ na anyị ejiri ikpe ziri ezi, ikpe ziri ezi na akụkụ niile na-emerụ onwe ha. npako ọ bụla.
“N’ihe kachasị mma m maara, ndị nnọchiteanya nile, ụlọ ndị nnọchiteanya nwere obi ụtọ, ndị na-adịghị atụgharị ọnụ, ọ dịghị ihe anyị nwere ike ime banyere ya.”
Oshiomhole kwukwara na mgbagwoju anya abụghị ihe mgbagwoju anya. Dị ka ya si kwuo, ndị ntụpọ ahụ enyelarị ihe ịrịba ama doro anya tupu ugbu a.
“Ọ dịghị onye ọ bụla nọ na APC ga-eju anya banyere mmepe ahụ, n’eziokwu, ha anọtụwo karịa oge anyị chere.
IGALI NWERE NNUKWU OBI UTO EBE NDI MGBA NIGERIAN NA AYG
Kwa gara aga, a gwara Kwara gọọmentị na ọ sịrị na ọ na-apụ ma ọ gwaghị mgbe.
“Ya mere, o juru anyị anya.”
Saraki gbaghaara onye mmegide Peoples Democratic Party (PDP) na Tuesday ka ya na ụfọdụ n’ime ndị na-akwado ya, tinyere gọọmenti ise fọdụrụ n’afọ 2014.
O kwuru na ya ga-alaghachi n’ememe ahụ mgbe o meriri oche oche onyeisi oche n’elu oche nke APC, dịka ya si kwuo, ọ ga-enwe obi ụtọ na ọ bụ onye nwe obodo na mmasị nke ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị Niger.
Dika ihe mere na afo 2014, Saraki hapuru APC na ndi isi ochichi Kwara, Sokoto na Benue maka ugbua ya na onye na-ekwu okwu ya bu onye isi okwu Bolaji Abdullahi.
Tags: APCBUKOLAihenemeIHENEME NOBODOIsimbidoISIMBIDO POSTisimbido postsisimbido tvisimbidopostISIMBIDOPOSTSISIMBIDOTVLATESTnewnewsnobodoPDPpoliticpoliticalPOLITICSpostpostsSARAKIupdate